मुख्यमन्त्री नितिश बनेपनि विहारको महानायक तेजस्वी यादव | सहारा टाइम्स
Home » madhesh » मुख्यमन्त्री नितिश बनेपनि विहारको महानायक तेजस्वी यादव
मुख्यमन्त्री नितिश बनेपनि विहारको महानायक तेजस्वी यादव
भारत विहार विधानसभामा एनडिए अर्थात भारतीय जनता पार्टी र जनता दल (यु) का गठनबन्धनले जसोतसो जीत हासिल गरेपछि मूलधारको मिडियाले र केही राजनीतिक विश्लेषकले त्यो जितलाई चमत्कारिक जित भन्नु आश्चर्यको कुरा होइन ।
किनभने पुरै चुनाव अभियानको अवधिमा स्पष्ट रुपमा देखि रहेको हारलाई मतगणनाको अन्तिम क्षणमा तन्त्र अर्थात चुनाव आयोगको मदतले जितमा परिणत गर्नु र फेरि त्यसलाई लोकतन्त्रको जीत भन्नु शालिन भाषामा त्यसलाई चमत्कार नै भनिन्छ ।
पछिल्लो केही वर्षदेखि चुनाव आयोगको मदतले कतिपय मौकमा जनादेशले बदलेको छ भने विहारमा यस्तो हुनु कुनै ठूलो कुरा होइन । चुनाव आयोगले एकपटक फेरि सावित गरिसकेको छ कि उसको स्वायत्तताको अपहरण भइसकेको छ । र अब त्यसको हैसियत सरकारको भन्साघर जस्तो भइसकेको छ । जहाँ त्यही पाक्छ जो सरकारले चाहन्छ । जे होस् भन्न त यही भनिन्छ कि एनडीए विजयता हो । भाजपाका सबै नेताको स्वरमा स्वर मिलाएर मुलधारका मिडियाले पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई अजय तथा महानायक भन्न शुरु गरिसकेका छन् । एनडिएलाई जसोतसो प्राप्त भएको जितलाई महान भनेपनि, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई यो जितको महानाययक भनेपनि त्यो सत्य होइन । चुनावको नतिजाले यो तथ्य बताइ रहेका छन् कि प्राविधिक वा आधिकारिक रुपमा एनडीएले जित हासिल गरेपनि यो चुनावको महानायक नरेन्द्र मोदी होइन, तेजस्वी यादव हुनुहुन्छ । जसको गठबन्धन बहुमत भन्दा केही दुरीमै रोकियो वा रोक लगाई दियो ।
भाजपाको लागि सन्तोषको कुरा यो मात्र होइन कि एनडीएलाई बहुमत प्राप्त भएको छ । सबभन्दा सन्तोष र खुशीको कुरा यो हो कि विहारमा एनडीएको सबभन्दा ठूलो पार्टी बनेको छ । तर विधानसभामा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्ने इच्छा उसको पुरा भएन । यो हैसियत त्यो राष्ट्रिय जनता दललाई प्राप्त भयो जसको नेता तेजस्वी यादव हुनुहुन्छ । उहाँलाई सिकारु, अनपढ, जंगलराजका युवराज आदि आदि अरु के के भनेका थिए । राष्ट्रिय जनता दलले विधानसभामा मात्र सबभन्दा बढी सीट ल्याएको होइन, उसले मत पनि सबैभन्दा बढी हासिल गरेको छ । यति मात्र होइन, तेजस्वी नेतृत्वको महागठबन्धनलाई प्राप्त सबै मत पनि एनडीए भन्दा कम छैन । महागठबन्धन र एनडीएलाई ३८–३८ मत प्राप्त भएको छ ।
चुनावको आयोगको आधिकारी तथ्यांक अनुसार आफ्नो मतको प्रयोग गर्ने करिब चार करोड जनताले २३.१ प्रतिशतले राष्ट्रिय जनता दललाई समर्थन दिएको छ । अर्थात कुल ९७ लाख ३६ हजार २४२ जना व्यक्तिले लालटेनमा बटन दवाएका छन् । भारतीय जनता पार्टी यो मामलामा राष्ट्रिय जनता दलभन्दा दोस्रो नम्बरमा रहेको छ । भाजपालाई १९.४६ प्रतिशतले मतदान गरेको छ । अर्थात ८२ लाख एकहजार ४०८ जनाले कमल छापका लागि बटन थिचेका छन् । अघिल्लो चुनावको तथ्यांकलाई विचार गर्ने हो भने तेस्रो नम्बरमा रहेका भाजपाले मत प्राप्त गर्नेमा सबै भन्दा अगाडि थियो । त्यो चुनावमा भाजपाले ५३ सीट प्राप्त गरेको थियो तर २४.४२ प्रतिशत अर्थात ९३ लाख आठ हजार १५ जनाले आफ्नो मत जाहेर गरेको थियो । त्यही सबै भन्दा बढी सीट जित्ने राष्ट्रिय जनता दलको १८.३५ प्रतिशत मत प्राप्त भएको थियो अर्थात उसले ६९ लाख ९५ हजार ५०९ मत प्राप्त गरेको थियो । पछिल्लो चुनावको तुलनामा राष्ट्रिय जनता दललाई ४.७५ भत अर्थात २७ लाख ४० हजार ७३३ मत बढी प्राप्त भएको छ । जबकी भाजपाको पछिल्लो चुनावको तुलनामा ६ प्रतिशत अर्थात ११ लाख ६ हजार ६०७ भोट कम प्राप्त भएको छ ।
चुनावमा सबैभन्दा ठूलो झटका सातौंपटक विहारको मुख्यमन्त्री पदमा सपथ लिने तयारी गरिरहनु भएका नीतिश कुमार र उहाँको पार्टीलाई लागेको छ । यद्यपी उहाँ मुख्यमन्त्री हुने कि नहुने कुरामा अझै आशंका छ । उहाँको जनता दल (यु) लाई अघिल्लो विधानसभा चुनावमा प्राप्त ७२ सीटको तुलनामा यसपटक ४३ सीट मात्र प्राप्त भएको छ । त्यो दलले १२२ सीटमा चुनाव लडेको थियो र उसले १५.४ प्रतिशत अर्थात ६४ लाख ८४ हजार ४१४ जनाले मात्र मतदान गरेको छ । जबकी पछिल्लो चुनावमा उहाँले १०० सीटमा चुनाव लडेर १६.८३ प्रतिशत मत हासिल गर्नुभएको थियो । अघिल्लो चुनावभन्दा यो चुनावमा नीतिश कुमारको पार्टीलाई प्राप्त लोकप्रिय मतमा निकै गिरावट आएको छ ।
चिराग भाजपाको मोहरा
नीतिश कुमारको पार्टीलाई कतिपय सीटमा रामविलास पासवानको छोरा चिराग पासवानको लोक जनशक्ति पार्टीले पनि प्रभावित पारेको थियो । त्यसले गर्दा नीतिश कुमार पार्टीलाई निकै नोक्सान भएको थियो । यसमा प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ कि चिराग पासवानको पार्टीलाई छुट्टै चुनाव लड्नका लागि भाजपाका शीर्ष नेताको आशीर्वाद प्राप्त थियो । यद्यपी शुरुमा अनुमान नै लगाई रहेको थियो भाजपा नेतृत्वको उद्देश्य नितिश कुमारलाई चुनावमा कमजोर गर्नु हो र चिराग पासवानलाई चुनावमा छुट्टै उतार्नु भाजपाको रणनीतिको एउटा हिस्सा हो । तर जब भाजपाका कतिपय वरिष्ठ नेताहरु जनशक्ति पार्टीको टिकटमा जनता दल (यु) को विरुद्धमा मैदानमा कुदे अनि सबै हकिकत बाहिर आयो ।
यो कुरा चिराग पासवान पहिला नै स्पष्ट गरिसक्नु भएको थियो कि उहाँको पार्टी त्यही चुनाव लड्छ जहाँ जनता दल (यु) उम्मेदवार मैदानमा हुन्छ । अर्थात कुरा साफ थियो ‘मोदी तुझसे बैर नही, नितिश तेरी खैर नही ।’ यद्यपी भाजपाले अर्कोतिर तेस्रो श्रेणीका नेता चिरागको यो फैसलाको आलोचना गर्दै नीतिश कुमारलाई नै आफ्नो गठबन्धनको नेता भन्दै रह्यो । तर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो कुनै पनि भाषणमा चिरागको अभिव्यक्तिमाथि कुनै टिप्पणी गर्नुभएन । जबकी चिराग पासवानले पुरै चुनावमा नितिश कुमारमाथि प्रहार गर्नुहुन्थ्यो र प्रधानमन्त्री मोदीलाई आफ्नो नेता मान्नु हुन्थ्यो । चिरागको अभिव्यक्तिप्रति प्रधानमन्त्री मोदी चुप रहनुले धेरै आशंका उब्जाएको छ ।
भाजपाको यो रणनीतिलाई नीतिश कुमारले राम्रोसँग बुझि रहनु भएको थियो । तर अन्तिमसम्म त्यस्तो कुनै प्रमाण फेला पार्न सक्नु भएको थिएन । यद्यपी प्रधानमन्त्री मोदी र भाजपाको साथ आफ्नो जनाधारको सन्देशमा कतै यो कुराको आशंका हुन दिनुभएन कि आफू सबै कुराबाट अवगत रहेको छ । जनता दल (यु) का कतिपय नेताले सार्वजनिक रुपमा भन्नुहुन्थ्यो कि ‘चिराग पासवान तो महज जमूरा है, मदारी तो कोई और हैं जो जमूरे नचा रहे है ।’ भन्नु आवश्यक छैन कि यो इशारा भाजपाको शीर्ष नेतृत्वको तर्फ थियो ।
जे होस्, चिराग पासवानाको पार्टीलाई एउटा सीट मात्र प्राप्त भएको होस् तर लगभग २० सीटमा उसको उपस्थितिले जनता दल (यु) को हारको कारण बताइएको छ । कतिपय सीटमा उसले जनता दल (यु) जीतको अन्तरलाई पनि कम गर्यो । लोक जनशक्ति पार्टीले १२३ सीटमा आफ्नो उम्मेदारी दिएको थियो । उसलाई ५.६६ प्रतिशत अर्थात कुल २३ लाख ८३ हजार ४५७ मत प्राप्त भएको थियो ।
काँग्रेसको बुरा हाल
विहार चुनावको महागठबन्धनमा सब कमजोर भारतीय काँग्रेस सावित भयो । काँग्रेसले चुनाव शुरु हुनुभन्दा पहिले तेजस्वी यादवमाथि दवाव बनाएर आफ्ना लागि ७० वटा सीट लिइ सकेको थियो । जुन पछिल्लो चुनावमा ४० सीटमा मात्र चुनाव लडेको थियो । यसपटक ३० सीट बढी लिएको थियो । काँग्रेसले अघिल्लो चुनावमा राष्ट्रिय जनता दल र जनता दल (यु) को साथमा महागठबन्धनमा रहेर चुनाव लडेको थियो र त्यतिबेला २७ सीट जितेको थियो ।
तर यसपटक ७० सीटमा १९ सीट मात्र जितेको छ । यद्यपी काँग्रेसलाई प्राप्त कुल मतमा यसपटक लोकप्रिय मत बढेको छ । त्यो बढ्नुको कारण उम्मेदवार सँख्या बढी भएको हुनाले हो । अघिल्लो चुनावमा ६.६६ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको काँग्रेसले यसपटक ९.५ प्रतिशत मत प्राप्त गर्यो । अर्थात कुल ३९ लाख ९५ हजार ३ जनाले काँग्रेसलाई मत गरेको थियो । काँग्रेसले प्राप्त गरेको मतलाई हेर्ने हो भने यो प्रदेशमा काँग्रेसको अवस्था निकै खराब छ भने बुझ्न सकिन्छ ।
महागबन्धनमा रहेको वाम दलले धेरै लामो समयपछि विहारको चुनावमा राम्रो प्रदर्शन गर्यो । चुनावमा उसले २९ सीटमा भाग लिएको थियो जसमा १८ सीटमा जीत हासिल गरेको छ । विश्लेषकहरुको भनाईलाई आधार मान्ने हो भने यदि वाम दललाई अझै केही सीट प्राप्त भएको भए, साधन स्रोत प्राप्त भएको भए र काँग्रेसले धेरै सीटमा चुनाव नलडेको भए चुनावको तस्वीर अर्कै हुन्थ्यो ।
जे होस् विहारको सत्ता फेरि एकपटक सपनाको सौदागर (खरिद गर्ने) को हातमा गएको छ । अब यो हेर्नु छ कि भाजपा आफ्नो प्रतिवद्धता अनुसार नीतिश कुमारलाई मुख्यमन्त्रीको रुपमा स्वीकार गर्छ कि गर्दैन । सन् २०१४ को लोकसभा चुनावमा आफ्नो पार्टीको हारको जिम्मेवारी लिँदै नीतिश कुमारले आफ्नो पदबाट राजिनामा दिनुभएको थियो । यसपटक पनि आफ्नो पार्टीको नराम्रो हारको जिम्मेवारी लिनुहुन्छ कि लिनु हुन्न त्यो हेर्न बाँकी छ । प्रश्न यो पनि उठ्छ कि आफ्नो पार्टी चुनावमा नराम्रो अवस्थामा गएपछि पनि गठबन्धनको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीको दावी गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न ?
यद्यपी यो प्रश्न ठूलो होइन कि विहारको मुख्यमन्त्री को बन्नुहुन्छ को बन्नु हुन्न । चुनावको सबभन्दा ठूलो उपलब्धी यो हो कि तेजस्वी यादवको रुपमा विहारलाई अगामी केही दशकका लागि एक नेता प्राप्त भएको छ । तेजस्वी यादवले विहारको जायज विषयलाई उठाउँदै चुनाव लड्नु भएको थियो । प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको स्तरहिन नीजि प्रहारलाई शालिन ढंगबाट जवाफ दिनुभयो र आफ्नो पार्टीलाई सबै भन्दा ठूलो पार्टीको हैसियता दिलाएर आफ्नो क्षमतालाई सावित गर्नुभयो । त्यसैले चुनावको महानायक तेजस्वी यादव नै हुनुहुन्छ ।
स्रोतः जनचौक अनलाइन
को हुन् तेजस्वी यादव ?
तेजस्वी यादव विहारको मुख्यमन्त्री लालु प्रसाद यादव र रावडी देवी यादवका छोरा हुन् । तेजस्वी यादव राष्ट्रिय जनता दलका नेता हुनुहुन्छ । विहारका राघोपुर निर्वाचन क्षेत्रबाट विहार विधानसभाको लागि उहाँ चुनिनु भएको छ । आठ कक्षा पास गरेपछि उहाँले स्कूल छाडेर क्रिकेटमा समय दिन लाग्नु भएको थियो । नीतिश कुमार सरकारमा उहाँ उपमुख्यमन्त्री रही सक्नु भएको छ । तेजस्वी यादव प्रीमियर लिगमा पनि काम गरिसक्नु भएको छ । तर उहाँ धेरै दिन टिक्नु भएन र राजनीतिमा हाम फाल्नुभयो ।
तेजस्वी यादव साँच्चैको खेलाडी हुनुहुन्छ । उहाँ सन् २००९ मा राज्य स्तरीय झारखण्ड क्रिकेट टीमका लागि पनि चुनिएका थिए । उहाँले पेसागत हिसाबले क्रिकेटको शुरुवात सैयद मुस्ताक अली ट्रफीमा एउटा बलरको क्षमताका लागि फर टी २० म्याचबाट भएको थियो । त्यसपछि उहाँलाई विदर्भ क्रिकेट टीमको विरुद्ध धनवादमा एउटा टेस्ट म्याचका लागि बोलाइएको थियो । उहाँलाई सात नम्बर बलरको रुपमा मैदानमा उतारिएको थियो ।
र पाँच अभरमा बलिङ गर्नुभयो । सन् २०१० मा उहाँले विजय हजारे ट्रफिमा आफ्नो एक दिवसीय शुरुवात गर्नुभयो र त्यसपछि क्रमशः ओडिशा टीम र त्रिपुरा क्रिकेट टीमको खिलाफ दुई म्याच खेल्नुभयो । उहाँको टीम पहिलो म्याच हार्यो भने दोस्रो जित्नुभयो । तेजस्वी यादवले त्रिपुराको खिलाफ एक विकेट लिनुभयो । सन् २०१३ सम्ममा तेजस्वीले आफ्नो क्रिकेट केरियरबाट सन्यास लिइसक्नु भएको थियो । मार्च २०१८ सम्मा उहाँ राष्ट्रिय जनता दलका वास्तविक नेता बनिसक्नु भएको थियो । नियुक्तिपछि उहाँले विहारका जनताका लागि “गोद और गलतियों” का लागि एका आधिकारीक माफी जारी गर्नुभएको थियो । जो राज्य सरकारमा आफ्नो कार्यकालको अवस्थामा पार्टीद्धरा गरिएको हुनसक्छ र उहाँ स्वयं पनि त्यतिबेला कम उमेरका हुनुहुन्थ्यो । विपक्षको नेताको रुपमा आफ्नो कार्यकालको अवधिमा तेजस्वी यादव सन् २०१९ मा आएको बाढीको समयमा राहत कार्यक्रम लिएर जनतको बीचमा जानु भएको थियो ।
क्रिकेट खेलाडी हुँदा पनि उहाँ पार्टी चुनावको प्रचारमा हिड्नु हुन्थ्यो । राजनीतिमा उहाँको आगमनले चुनाव प्रचार रणनीतिकार तथा डिजिटर आउटरीच शुरु गरेको रुपमा उहाँलाई त्यतिबेला निकै प्रसंशा गरिएको थियो । राष्ट्रिय जनता दलका अनुसार सन् २०१४ को भारतीय आम चुनावमा लालुप्रसाद यादव, नीतिशकुमार र भारती काँग्रसबीचमा गठबन्धन बनाउन सफल हुनुभएको थियो । सन् २०१५ को विहार विधानसभा चुनावमा तेजस्वी दुवै महागठबन्धनको उम्मेदवारको रुपमा आउनु भएको थियो । दोनो रायपुर निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधिको रुपमा चुनिनु भएको थियो । चुनावमा विधानसभा गठबन्धनलाई ठूलो बहुमत प्राप्त भएको थियो । त्यसको कारणले तेजस्वी यादवलाई विहारको उपमुख्यमन्त्रीको रुपमा नियुक्त गरिएको थियो ।
सन् २०१७ मा केन्द्रीय जाँच ब्युरो (सीबीआइ) ले एउटा केसमा रीट दायर गर्यो र प्रवर्तन निर्देशनालय (इडी) ले भ्रष्टाचारको मामिलामा मन लोन्ड्रिङको सम्बन्धमा उहाँमाथि छानविन शुरु गर्यो । जसमा भारतीय रेल्वे, पर्यटन निगम, तेजस्वी र उहाँका अन्य सहयोगीको विरुद्धमा थियो । यो नै नितिश कुमारका जनता दल (यु) को महागठबन्धनबाट बाहिर गर्ने र भाजपाको साथ मिलेर नयाँ सरकार बनाउने कारण बन्यो ।
त्यसपछि तेजस्वी यादव राष्ट्रिय जनता दलको कारण विपक्षी दलका नेता बन्नुभयो, जो राज्य विधानसभाका सबैभन्दा ठूलो पार्टी थियो । आफू विरुद्ध रिटको जवाफमा तेजस्वी यादवले भाजपामाथि सरकारी योजनाको दुरुपयोग गर्नका लागि राजिनीति योजना बनाएको आरोप लगाउनु भएको थियो । सन् २०१८ मा उहाँलाई दिल्ली उच्च न्यायलयले सो आरोपबाट मुक्त गरिएको थियो किनभने उसले भनेको थियो कि उहाँमाथि त्यतिबेला त्यो आरोप लगाइएको थियो जुन बेला उहाँ १४ वर्षको हुनुहुन्थ्यो ।
नाम– तेजस्वी प्रसाद यादव
जन्म तिथि–९ नोभेम्बर १९८९
जन्मस्थान–गोपालगञ्ज, विहार भारत
पार्टीको नाम–राष्ट्रिय जनता दल
शिक्षा– ९ कक्षा पास
बुवाको नाम–लालुप्रसाद यादव
आमाको नामः रावडी देवी यादव
स्रोतः भारतीय सञ्चारमाध्यम